ko htike's prosaic collection: October 2009
Posted by ကိုထိုက် at 09:166comments
Posted by ကိုထိုက် at 08:480comments
Posted by ကိုထိုက် at 09:325comments
Posted by ကိုထိုက် at 09:293comments
ပိုက်ဆံ မရှိရင် သေတတ်တယ် ဆိုတာကို သက်သေပြခြင်း
Posted by ကိုထိုက် at 23:356comments
တာရာမင်းဝေရဲ့ ဇာပနမှာ ကိုမင်းကိုနိုင် ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ "ကြယ်ကြွေ သတို့သား" ကဗျာလေးကို မင်းကိုနိုင်မွေးနေ့ အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်။
မင်းဟာ ယုံကြည်ရာကို ရင်သွေးလို မွေးခဲ့တယ်။
ဒဏ်ရာတွေကို ဆီမိးလို ထွန်းခဲ့တယ်
၅။ သွားနှင့် သူငယ်ချင်း
၆။ သွားနှင့် သူငယ်ချင်း
ဒေါင်းအလံ ပြန်စိုက်မယ့် တနေ့
(Read on the occasion of the death of Shwe Pone Lu a.k.a Taya Min Wai (writer) who died on 6th August 2007; Written and read by Min Ko Naing)
You nurtured what you believe likeababy
You lit up your agonies likeacandelight
You licked your bruises and lived your days
You peeled your skin off
And sharpened your bones as if they wrer needles.
You made your own clothes
And smartly you showed them off.
To believe the pains
Of this world with many stars falling down
We have to live on
To protect ourselves with our hands from the pains
Of this world, under many scorching suns,
We have to live on.
To collect your poems
In Cry of the Earth
On the day we wave the flag of "fighting-peacock"
Posted by ကိုထိုက် at 11:08 1 comments
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရဖွယ်ရှိ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်လိမ့်မည် ဆိုသောသတင်းများ လက်ခံရရှိထားတာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ ကွက်ကဲမှုဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ လေဆိပ်လုံခြုံရေးအား အထူးကြပ်မတ် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်။
ခရီးသည်များအပါအဝင် လေဆိပ်အတွင်း အဝင်အထွက် ပြုလုပ်သူများအား အထူးစောင့်ကြည့် လျှက်ရှိပြီး မသင်္ကာဖွယ်ရာ လူဟုယူဆပါက သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများထံ ချက်ခြင်းသ တင်းပို့ရန် လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများအား ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ယခု လဆန်းပိုင်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ဧရာဝတီတိုင်း ခရီးစဉ်အတွင်း လုပ်ကြံခံရနိုင်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် ခရီးစဉ်အား ခေတ္တ ရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဌာနချုပ်မှ သတင်းရရှိပါတယ်။
အဲဒီ လုပ်ကြံ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်နေသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေဆိုတာကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင် တိတိကျကျ စုံစမ်း မသိရှိရသေးတာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း အတွက် အဓိက လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့်တို့အား နေပြည်တော်စစ်ဌာနချုပ်မှ ဖိအားပေး ခိုင်းစေလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းများကြားသိရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 11:06 1 comments
Posted by ကိုထိုက် at 16:582comments
အရွယ်က ဆွဲခေါ်လာခဲ့သူရဲ့ အကြီးဆုံးသားသာသာ
ဒဏ်ရာနာမည်က ဘာတဲ့”မှောင်ရိပ်ခိုမှု” တဲ့ ….။ ။
(….)April 29, 2009.
Posted by ကိုထိုက် at 16:572comments